Kunzima endodeni ‘ebulawe’ isaphila | Isolezwe
Kunzima endodeni ‘ebulawe’ isaphila
Isolezwe / 29 November 2012, 12:50pm / NONHLANHLA MKHABELA
USEPHILA impilo yokuqokelela imali yokugibela aye emahhovisi oMnyango wezaseKhaya eyozama ukuthola umazisi owesilisa okuthiwa ushonile kodwa ebe ephila.
UMnuz Fano Ngcobo (71) waseNewtown A, eThekwini uthi ayisekho enye into ayicabangayo uma ethola amasentshana ngaphandle kokuthi agibele aye emahhovisi ezaseKhaya eyozama inhlanhla yokuthola umazisi omusha njengoba kumanje efana nomuntu ongasekho ngoba kuthiwa usashona. UNgcobo kuthiwa wadlula emhlabeni nakuba esawadla anhlamvana.
Uthe kuwo lo nyaka wathi eyobhalisela ukuvota kwathi uma kufakwa izinombolo zikamazisi wakhe kwikhompyutha kwavela ukuthi washona ngo-2002 eMgungundlovu.
“Angikaze ngihlale kwakuhlala eMgungundlovu, ngisho ukuvakasha lokhu futhi anginazihlobo khona angazi yini lena engibeka khona,” kuchaza uNgcobo.
Uthe ngesikhathi ethola lokhu wahamba waya emaphoyiseni wenza incwadi efungelwe eshoyo ukuthi usaphila waya nayo eMnyangweni wezaseKhaya bafike bathi ngoba “washonela” eMgungundlovu akaye khona ayolungisa udaba lwakhe.
“Ngafika khona ngashaya izithombe ngafaka isicelo sikamazisi omusha ngalinda kodwa ngathi sengiyobheka ukuthi usuphumile yni kwathiwa amafomu ami awasatholakali,” kusho uNgcobo.
Uthe kwabe sekuthiwa akabuye nomazisi babazali ukuze bayiswe ePitoli nokuyindlela “abazomvusa” ngayo. Uthe wabatshela ukuthi sebashona abazali futhi nomazisi bashiswa.
“Ngangilokhu ngigqigqa khona-ke kwaze kwathiwa angiyofaka isicelo esisha eThekwini ngoba kukude eMgungundlovu futhi kuyabiza ukulokhu ngiya khona. Kwathi uma ngiya kulelo Theku bangikhomba emuva eMgungundlovu,” kulandisa uNgcobo ongakasizakali kuze kube yimanje.
Okhulumela uMnyango wezaseKhaya uMnuz Albert Motaung uthe kuningi okwenza abantu bazithole besesimeni esifana nesikaNgcobo okubalwa nabezinkampani zomasingcwabisane ikakhulukazi lapha KwaZulu-Natal.
“Ngizothola inombolo yakhe kamazisi sibheke ukuthi kwenzekani ngalolu daba. Le nto ingalungiseka kalula uma sesithole yonke imininingwane,” kusho uMotaung.
Uthe kwesinye isikhathi kusuke kuwumnini kamazisi uqobo owenze ubugebengu yingakho kubalulekile ukuthi kuphenywe.